ရှူတင်နားရက်လေးမှာ ပင်းတယမြို့မဈေးထဲ အလည်သွားရင်း မုန့်တွေ လျောက်ပတ်စားခဲ့တဲ့ ကျော်ထက်ဇော် – Suehninsi
ရှူတင်နားရက်လေးမှာ ပင်းတယမြို့မဈေးထဲ အလည်သွားရင်း မုန့်တွေ လျောက်ပတ်စားခဲ့တဲ့ ကျော်ထက်ဇော်
မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်ခြင်းကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော ကျော်ထက်ဇော်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတာမကြာသေးတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ထက်ဇော်က အကယ်ဒမီများရှင် မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ တပည့်အရင်းဖြစ်ပြီး အနုပညာအမွေတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ယူထားတဲ့
သူလည်းဖြစ်ပါတယ်. ။ MRTV-4မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ စတင်သရုပ်ဆောင်ရင်း တိကျပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာ သိမ်းပိုက်ရယူထားနိုင်တဲ့ သူပါနော်….။ လတ်တလောမှာတော့ ကျော်ထက်ဇော်က “အချစ်ဖွဲ့ လေညင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ မိုးသောက်ဦးနဲ့ ရောင်နီဦး
နှစ်ကိုယ်ခွဲကာရိုက်တာလေးနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးက အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်သလို လူ့လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းတရားလေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေကလည်း အကြိုက်တွေ့နေမှာ အသေအချာပါပဲနော်.။ကျော်ထက်ဇော်က ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က အမှတ်တရ
ပုံရိပ်လေးတွေကို သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ အမြဲဖော်ပြလေ့ရှိနေပြီး ယနေ့မှာတော့ ရှုတင်နားရက်လေးမှာ ရှမ်းပြည်နယ်၊ပင်းတယမြို့က ပင်းတယဈေးကို သွားရောက် လည်ပတ်ကာ မုန့်တွေစားနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ဈေးကလည်း အတန်အသင့်နဲ့ မုန့်တွေလည်း အများကြီးစားရလို့ ပျော်နေတဲ့အပြင်
ပင်းတယမြို့က ဈေးသည်တွေကလည်း ဖော်ရွေလွန်းတာကြောင့် ကျော်ထက်ဇော်က ” ဆရာလေးနဲ့ ပင်းတယ ဈေးနေ့အမှတ်တရ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်ပဲကြုံခဲ့ရတဲ့ ဈေးနေ့လေးမို့လို့ ကျနော့်ဇော်ဂျီလေးတွေအတွက် အမှတ်တရလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားပါသေးတယ်.။ ကဲ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကျော်ထက်ဇော်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..။
မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျခွငျးကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသားခြော ကြျောထကျဇျောကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာတာမကွာသေးတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ ကြျောထကျဇျောက အကယျဒမီမြားရှငျ မို့မို့မွငျ့အောငျရဲ့ တပညျ့အရငျးဖွဈပွီး အနုပညာအမှတှေကေို လကျဆငျ့ကမျးသယျယူထားတဲ့
သူလညျးဖွဈပါတယျ. ။ MRTV-4မှာ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှမှော စတငျသရုပျဆောငျရငျး တိကပြိုငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျအားပေးခဈြခငျမှုကို အခိုငျအမာ သိမျးပိုကျရယူထားနိုငျတဲ့ သူပါနျော….။ လတျတလောမှာတော့ ကြျောထကျဇျောက “အခဈြဖှဲ့ လညေငျး” ဇာတျလမျးတှဲလေးထဲမှာ မိုးသောကျဦးနဲ့ ရောငျနီဦး
နှဈကိုယျခှဲကာရိုကျတာလေးနဲ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးတှဲလေးက အခဈြဇာတျလမျးတှဲလေးဖွဈသလို လူ့လောကမှာဖွဈပကျြနတေဲ့ အကွောငျးတရားလေးတှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးရိုကျကူးထားတာဖွဈလို့ ပရိသတျတှကေလညျး အကွိုကျတှနေ့မှော အသအေခြာပါပဲနျော.။ကြျောထကျဇျောက ရိုကျကှငျးနောကျကှယျက အမှတျတရ
ပုံရိပျလေးတှကေို သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ အမွဲဖျောပွလရှေိ့နပွေီး ယနမှေ့ာတော့ ရှုတငျနားရကျလေးမှာ ရှမျးပွညျနယျ၊ပငျးတယမွို့က ပငျးတယဈေးကို သှားရောကျ လညျပတျကာ မုနျ့တှစေားနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတဈခုကို တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ…။ဈေးကလညျး အတနျအသငျ့နဲ့ မုနျ့တှလေညျး အမြားကွီးစားရလို့ ပြျောနတေဲ့အပွငျ
ပငျးတယမွို့က ဈေးသညျတှကေလညျး ဖျောရှလှေနျးတာကွောငျ့ ကြျောထကျဇျောက ” ဆရာလေးနဲ့ ပငျးတယ ဈေးနအေ့မှတျတရ တဈပတျမှာ တဈရကျပဲကွုံခဲ့ရတဲ့ ဈေးနလေ့ေးမို့လို့ ကနြေျာ့ဇျောဂြီလေးတှအေတှကျ အမှတျတရလေး တငျပေးလိုကျပါတယျဗြ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားထားပါသေးတယျ.။ ကဲ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှေ ကြျောထကျဇျောရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…..။
Source : Kyaw Htet Zaw’s Facebook | Reference & Credit : Myanamrload
ပထမဆုံးပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ ဈေးရောင်းရင်း ဆေးကုနေရတဲ့ အဖွားကို ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ချစ်ဇနီးလေးကို တန်ဖိုးကြီး နားကပ်တစ်စုံ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူး
ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန် မရှိတော့လောက်အောင် အလုပ်တွေ တစ်နေကုန်လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ခြူးလေး